Zenkit: Chengetedza Mabasa Mukati Mapoka, Midziyo uye Makambani | Martech Zone
Sezvo kudzimwa kwaWunderlist kwakaitwa zviri pamutemo, vashandisi vazhinji vanga vachikurumidza kutsvaga imwe nzira. Zviuru vakatotaura kusagadzikana kwavo pane dzimwe nzira dzazvino, ndosaka Zenkit yakafunga kugadzira Zenkit Kuita saka vashandisi veWunderlist vanogona kunzwa pamba chaipo. Hazvisi zvisingatarisirane nemaitiro eapps yavo uye intuitive interface yakafanana neWunderlist.
Anhasi maapplication anogona kunge ari nyore zvinyorwa (senge Wunderlist, Todoist, kana MS Kuita) kana akaomesesa manejimendi manejimendi manejimendi ane akawanda maonero (senge Wrick or JIRA). Ichokwadi ndechekuti, zvakadaro, kuti mhando dzakasiyana dzevashandi dzinoda mhando dzakasiyana dzezvishandiso. App imwechete inogona kuzviita sei zvese?
Zenkit iri kuvhura Zenkit To Do, yavo nyowani manejimendi manejimendi app, Wunderlist isati yamiswa musi wa6 Chivabvu, 2020.
Zenkit To-Do Inobatana neZenkit:
Zenkit (yakapusa yakapusa) yeku-ita app inosanganiswa zvizere neyekutanga Zenkit chikuva. Saka kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe unogona kushanda pane ako mabasa mune yeku-kuita app kana kushandisa akaomesesa maonero senge Kanban uye Gantt machati. Hapana kuwiriranisa, hapana kupinza kunze, hapana kunetsa! Ese maapplication anogovana imwe data chitoro. Izvi zvinogona kuunza vanhu kubva kumatanho akasiyana pamwechete, mamaneja nehurongwa hwavo hwekutarisa kune nhengo dzechikwata nemabasa avo anoitika.
Zvimiro zveZenkit uye Zenkit Plus zvinosanganisira:
Chiitiko chekutevera - Tarisa zviitiko pazvaiitika. Ona zvese zviri kuitika muzvikwata zvako, kuunganidzwa, uye kunyange zvinhu zvemunhu.
Yepamberi Kutungamira - Shandisa SAML-based SSO, maneja vashandisi nekupa, uye kuongorora uye kuongorora zviitiko zvevashandisi neMasangano.
Kubatanidzwa - Ona zviyero zvechero nhamba yemunda mune chero maonero ekukurumidza kuongorora data rako.
Govera mabasa - Nyorera zvirinyore mabasa nekuaisa kunhengo dzeboka rako. Vazivise ivo nekukurumidza apo basa nyowani rinoda kutarisirwa kwavo.
Zviito Zvakawanda - Wedzera, bvisa, kana kutsiva kukosha kwechero munda mune akawanda zvinhu. Usambofa wakabatirira kuita unonetesa kupinda data zvakare!
Karenda Kubvumirana - Usatombopotsa imwe musangano! Zenkit's Google Calendar kusangana inosanganisira kuti ako makarenda anogara achienderana.
Checklists - Unoda inokurumidza nzira yekutevera subtasks? Shandisa chinyorwa! Teedzera kufambira mberi nekuona uye maka zvinhu kure kana vapedza.
Shingairira - Koka vaunoshanda navo, mhuri, uye shamwari kuti vabatsirane newe pazvirongwa zvako.
Mavara Zvinhu - Ita kuti zvinhu zvako zvimire nekuzvipenda. Rongedza musiyano pakati pemabasa neushingi, mavara akajeka
Comments - Shandira pamwe nechikwata chako mumashoko, kuitira kuti basa rako nekutaurirana zvirambe zvakabatana. Akaita chikanganiso? Rongedza mhinduro kuitira kuti munhu wese ave neruzivo rwakakodzera.
Tsika Mamiriro - Gadzira Zenkit kuti ienderane newe nechikwata chako. Wedzera ako mashure uye mifananidzo uine kusimudzira kuZenkit Plus.
Desktop maapplication - Yakanaka, isina-kukanganisika isina-macOS, Windows, uye Linux. Kurumidza-wedzera mabasa, vhura akawanda masikirini, uye gara unogadzira kunze kwenyika.
Dhonza uye udonhedze - Intuitively kuronga ako mapurojekiti uye fambisa zvinhu pamwe iwe sezvaunofambira mberi nekukweva uye kudonhedza.
Email kuunganidzwa - Tumira Email basa kuZenkit zvakananga uye upe mabasa kuburikidza neakasiyana email kero. Gadzira zvinhu zvitsva kubva mubhokisi rako rekunyora.
Favorites - Unoda nzira yekutevera zvinhu kubva kune yako account munzvimbo imwechete? Maka ivo sevanodisisa kuti iwe ugone kuvasvikira mune snap.
Faira kugovana - Shandai pamwe chete. Goverana zvinyorwa nemifananidzo kubva kudesktop yako, kana kubva kune yako aunofarira makore ekuchengetedza masevhisi.
firita - Drill pasi nekukurumidza kuti uwane chaizvo izvo zvauri kutsvaga uchishandisa mafirita ane simba eZenkit. Sevha mafirita anowanzo shandiswa kugadzira tsika maonero.
Formulas - Gadzira mafomura uchishandisa chero nhamba yemunda kana rejista yekubatanidza, kusanganisa uye kuongorora data kubva kune chero kuunganidzwa.
Gantt Chart - Ronga uye uteedzere mapurojekiti akaomesesa pane yakajeka nguva, ine lag & lead, milestones, yakaoma nzira, uye nezvimwe!
Global Calendar - Juggling akawanda mapurojekiti? Unoda nzira yekutevera mabasa uye zviitiko pane ese maunganidzwa? Dzimwe nguva iwe unongoda kuwona zvese munzvimbo imwechete. Pinda "Karenda Yangu".
Kutsvaga Kwenyika - Unoda kusvika kuchinhu nekukurumidza? Unoda kutsvaga kuburikidza nezvinhu zvakachengetwa? Kutsvaga kwepasirese kunogona kuwana chero chinhu mumasekondi.
Mavara - Zenkit label minda inochinjika zvakakwana kuisa muzvikamu zvinhu, kupa pekutanga, kuteedzera kufambira mberi, uye zvakawanda, zvimwe zvakawanda. Rongedza ako maKanban mabhodhi nechero tsamba yemagetsi yaunogadzira.
anotaura - Unoda kuzivisa nekukurumidza dzimwe nhengo dzechikwata nezve chakakosha kugadzirisa? Shandisa @mentions kubaya vaunoshanda navo uye uunze nhengo dzechikwata dzakakodzera muhurukuro.
Mobile Apps -Shandisa Zenkit paunenge uchienda! Hapana kubatana? Hapana dambudziko. Zenkit yeIOS uye Android inotsigira isinei nebasa uye ichaenderana kana wabatanidzwazve.
Notifications - Rega ziviso zvibatsire pane kukukanganisa. Gadzirisa zviyeuchidzo zvako kuti uwane ruzivo rwaunoda, nguva uye kupi kwaunenge uchichida.
Dzokororo Zvinhu - Une mabasa aunodzokorora vhiki rega kana mwedzi? Gadzira rinodzokororwa basa kuti urege kupotsa musangano.
References - Unganidza maunganidzwa kuti ugadzire yakazara yakasarudzika dhata dhatabhesi iyo iri nyore kushandisa seye-yekuita runyorwa Iine simba kupfuura kungobatanidza, mareferenzi anochengeta data rako richienderana.
Pfuma yekunyora zvinyorwa - Zenkit yakapusa yakapora zvinyorwa edhitaineti inoita kuti iwe ugadzire akanaka mavara kuti uwedzere basa rako. Shandisa HTML, kumaka, kana zvinyorwa zvakakosha kuti mazwi ako abude.
Shortcuts - Kurumidza wedzera zvinhu, fambisa matavi epfungwa, wedzera mavara, uye nezvimwe zvakawanda nezvidimbu zveZenkit.
Subtasks - Wedzera maTaskask ane mazuva akakodzera, vanopihwa vashandisi, uye nezvimwe, kune chero chinhu.
Chinja maonero - Boka rako reKanban bhodhi nechero chinyorwa mumazita uye mitsara. Gadzira yakakosha matrix kana track kufambira mberi nenhengo.
Chikwata Mabasa - Inbox yetimu yako. Nzvimbo imwe yekutarisa zvinhu zvese zvawakapihwa iwe kana kune chero munhu waunoshanda naye. Gadzira uye otomatiki ugoisa zvinhu kuchikwata chako pasina kurasika mumapurojekiti akaomarara.
Chikwata Wiki - Gadzira uye ubudise yakanaka, yemukati-yakapfuma wiki munguva. Shandira pamwe munguva chaiyo nenhengo dzewiki.
Templates - Hauna chokwadi chekutangira? Tora shizha kubva mubhuku revanyanzvi uye dhawunirodha rimwe rematemplate edu akagadzirira bhizinesi.
To-do chinyorwa - Chinja chero chirongwa kuve chekuita-chinyorwa uye ubhururuke kuburikidza nemabasa ako! Maka mabasa sezvo apedza uye wovaona vachidzika pasi pechinyorwa.
Zviviri-Factor Kubvuma - Ita shuwa kuti account yako yakachengetedzeka nezvinhu zviviri kusimbiswa. Inowanikwa kune vese vashandisi veZenkit.
Basa reMushandisi - Govera mabasa kune vashandisi kusimudzira kuchengetedzeka kwebasa rako uye kusimudzira kugadzirwa kwechikwata chako.
Shanda pasina - Shandisa Zenkit uchienda, kunyangwe iwe uine internet yekubatanidza kana kwete! Offline modhi inotsigirwawo muwebhu vhezheni
Zapier - Sangana pamwe neanopfuura mazana manomwe emamwe maapplication ako aunoda uye masevhisi nekubatanidzwa kweZenkit's Zapier Zapbook
Tags: Jirabasa manejimendikuitakuita-chinyorwatodoistwunderlistzenkit
Ndatenda Douglas, handisati ndawana Wunderlist pamberi pepositi yako. Ndinofanira kuziva zvakawanda! Iwe uchave uchiita yekutevera post pane iyo foni app? Unoda kuziva zvakawanda!